စိတ်ကူးပျော်ရာ: August 2015
“ဝါခေါင်လပြည့် မေတ္တာအခါတော်နေ့ မေတ္တာအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ”
ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ကို မေတ္တာအခါတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျင်းပရခြင်းမှာ-
“မေတ္တသုတ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း”နှင့် ဆက်စပ်၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
❖(၁)။မေတ္တာသည် ပါဠိဝေါဟာရဖြစ်၍ မြန်မာလို ချစ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရ၏။
❖(၂)။မေတ္တာဓာတ်သည် ကြည်လင်အေးမြ၍ ငြိမ်းချမ်းသောသဘောကို ဆောင်၏။တဏှာကဲ့သို့ နောက်ကျူ
ပူလောင်သော သဘောမျိုး မဟုတ်ချေ။
❖(၃)။မေတ္တာသည် ဗြဟ္မဝိဟာရ တရားလေးပါးတွင် တစ်ပါး အပါအဝင်ဖြစ်၏။
❖(၄)။မေတ္တာသည် အတိုင်းမသိသော သတ္တဝါတို့အပေါ်တွင် အာရုံရောက်၍ “အပ္ပမညာတရား”ဟုတွင်၏။
❖(၅)။မေတ္တာသည် ဈာန်ကို ရနိုင်စေသော “ဗြဟ္မဝိဟာရတရားထူး” ဖြစ်၏။
❖(၆)။မေတ္တာဗြဟ္မစိုရ်ကို ပွါးများနေလျှင် ကမ္ဘာလောကကြီးထာဝရ ငြိမ်းချမ်းနိုင်၏။
❖(၇)။မေတ္တာအကျိုး ၁၁မျိုးကို အဂုင်္တ္တရပါဠိတွင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားပါသည်။
❖(၈)။မေတ္တာပွါးနည်း ၁၁နည်းကို မေတ္တာသုတ်၌မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား ထားပါသည်။
❖(၉)။မေတ္တသုတ်မှာ ခုဒ္ဒကပါဌနှင့် သုတ္တနိပါတပါဠိတွင် လာရှိပါသည်။
❖(၁၀)။ငါးရာ့နှစ်ဆယ်ရှစ်သွယ် မေတ္တာပွါးနည်းများကို ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ်တွင် ပြည့်စုံစွာ ဟောကြားထားပါသည်။
❖(၁၁)။မေတ္တာကို အဒေါသ၏ပရိယာယ်အဖြစ် ပဋိကတ်ကျမ်းဂန်တို့၌ ဟောကြားထားပါသည်။
❖(၁၂)။မေတ္တာ၏ အဝေးရန်သူမှာ ဒေါသဖြစ်၍၊အနီးရန်သူကား တဏှာလောဘ ဖြစ်လေသည်။
❖(၁၃)။တဏှာရာဂသည် မေတ္တာအယောင်ဆောင်၍ သတ္တဝါကို လှည့်စားတတ်လေသည်။
❖(၁၄)။မေတ္တာသည် ဒေါသ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍၊ဒေါသဖက်သူက ကြမ်းတမ်းသလောက်၊
❖(၁၅)။မေတ္တာဓာတ်သည် သီတာရေ နှင့် လရောင်တမျှ အေးမြပြီး၊ဒေါသမှာမူ နေနှင့်မီးပမာ
❖(၁၆)။ရေမြေခြား၍ ဝေးကွာနေသော်လည်း “မေတ္တာ”ဖြင့် ဆက်သွယ်လျှင် အနီးကလေးဟု ဆိုရ၏။
❖(၁၇)။မေတ္တာကို အလျားအနံ မရှိသော်လည်း၊ အသွားအပြန် ရှိသောတရား ဟုဆိုကြ၏။
❖(၁၈)။စောင်ခြုံ၍ မလုံနိုင်၊မေတ္တာခြုံမှ လုံနိုင်၏။
❖(၁၉)။ငွေဖြင့် ဆက်ဆံရုံနှင့် မမြဲ၊မေတ္တာဖြင့် ဆက်ဆံမှ တစ်သက်ပန် မြဲနိုင်၏။
❖(၂၀)။စက်၊ဗုံး၊အမြောက်မက ထက်မြက်ထိရောက်ပြီး၊တစ်သက်လုံး အောက်ကျနိုင်သော လက်နက်မှာ
“သည်းခံခြင်း” ဆိုသော မေတ္တာလက်နက်ပင်ဖြစ်လေသည်။
❖(၂၁)။မေတ္တာစွမ်းရည်ကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူတို့အပေါ်အနိုင်ရရှိပုံကို “သာမာဝတီမိဖုရား၊ဥတ္တရာ အမျိုးသမီးနှင့်မာဃလုလင်” တို့ကို သာဓက အဖြစ် ကြည့်သင့်၏။
❖(၂၂)။အိုးအလုံး ၁၀၀ဖြင့် တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ချက်၍လှူဒါန်းသော ဒါနထက် နို့တစ်ညှစ်စာ တစ်ခဏတာမျှပွါးများသော မေတ္တာဘာဝနာက ပို၍အကျိုး
-【အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည်) ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ “အခါတော်နေ့များမှ”-】
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 09:26:00 AM No comments:
ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်မှု အားကစားသည် မိမိ တည်ဆောက်လိုသော ကြွက်သား အစ်ိတ်အပိုင်းမှ ကြွက်သားစများကို အလေးဖြင်. ကွေးချီ ဆန်.ချီ ပြုလုပ် လေ.ကျင်.ပေးခြင်းဖြင်. ကြွက်သားများ ရုံးကန် တွန်းလှန် ပေါ်ထွက်လာခြင်းကို ကြွက်သားဆိုင်များ ရှုံနိုင်မှုမှ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဟု ဆိုပေသည်။ ကြွက်သားဆိုင် တစ်ခုရှိ အစွန်းနှစ်ဘက်ကို အနီးဆုံး ဖြစ်အောင် ရှုံနိုင်လေ ကြွက်သား အရည်အသွေး အစွမ်းတက် လာလေဖြစ်သည်။ သို.သော် မှန်ကန်သော လေ.ကျင်.နည်းကို အသုံးပြုတတ်ရန် လိုပေသည်။
နည်းစနစ် မှန်ကန်မှု မရှိပါက အစွန်းထွက်မှုလည်း ကောင်းမွန်လာမည် မဟုတ်ပေ။ အိုလံပစ် အလေးမနည်းသည် သတ်မှတ်ထားသော မနည်းနှစ်မျိုး (အမြန်မ နှစ်ဆင်.မ) ကို အများဆုံး မနိုင်ရန် ခွန်အား သန်စွမ်းမှုရှိရန် လေ.ကျင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် တည်ဆောက်မှု အားကစားသည် ခွန်အား သန်စွမ်းမှုထက် ကြွက်သားများ ကြီးထွား မို.မောက် ဖေါင်းကြွ ပေါက်ကွဲ ရုန်းကန်ပေါ်ထွက်မှု ကို အဓိကထားခြင်း ဖြစ်သည်နှင်. အညီ ပြင်းထန်သော ကြွက်သား ရှုံနိုင်မှုဖြင်. လေ.ကျင်. တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ကာယဗလ တည်ဆောက်မှု၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်သည် ကိုယ်ခန္ဓာရှိ ကြွက်သားများ အားလုံး သူ.နေရာနှင်.သူ ညီညွတ် ကြီးထွားရေးပင် ဖြစ်သည်။ ကာယဗလ လေ.ကျင်နည်းပေါင်း အမျိုးမျိုးရှိသည်။
၁။ ကိုယ်ခန္ဓာ အထက်ပိုင်း (တစ်နေ.) အောက်ပိုင်း (တစ်နေ.) The Split System
၂။ ကိုယ်ခန္ဓာ အထက် အောက်ပိုင်းကို (၄၅)မိနစ် လေ.ကျင်.ပြီးနောက် အနည်းဆုံး (၆/၈) နာရီ နားပြီး အခြား ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများကို (၄၅)မိနစ် လေ.ကျင်.ပေးခြင်း။ The double Split System
၃။ မရပ်မနားပဲ လေ.ကျင်.ခန်း တစ်ကြော. ပြီးသည်နှင်. တဆက်တည်း နောက်ထပ် လေ.ကျင်.ခန်း တစ်ခု ကို ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခြင်း။ A Superset
၄။ (၃)ရက် ကစား (၁)ရက်နား Three on one off
၅။ (၂)ရက်ကစား (၁)ရက်နား Two on one off
၆။ (၁)ရက်ကစား (၁)ရက်နား One on one off
၇။ လေ.ကျင်.ခန်း နောက်ဆုံး အကြိမ်တွင် အတင်းအကြပ် အားထုတ် လေ.ကျင်.ခြင်း။ Force reps
၈။ လေ.ကျင်.ရာတွင် သက်တောင်. သက်သာဖြစ်စေရန် မိမိကိုယ်ကို လွဲပြီး လှုပ်ရှား လိမ်ညာ လေ.ကျင်.ခြင်း Cheating reps
အထက် ဖော်ပြပါ လေ.ကျင်.နည်းများကို အခြေခံလျက် နည်းပြဆရာတို.သည် one to one traning တစ်ယောက်ခြင်း လေ.ကျင်. ပေးခြင်းနှင်. one to all အများ အဖွဲ.အစည်းကို လေ.ကျင်.ပေးခြင်းစသည် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ် ကြပေသည်။
ကာယဗလ လေ.ကျင်.သူ တို.သည် မိမိနှင်. သင်.တော်သော လေ.ကျင်.ခန်းကို ရွေးချယ် လေ.ကျင်.တတ် ရမည်။ မည်သည့် လေ.ကျင်.ခန်း၊ မည်သည်. လေ.ကျင်.နည်းစနစ် သည် မိမိအတွက် အသင်.တော်ဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေးတော ဆင်ခြင်၍ နည်းပြဆရာကောင်း ထံချဉ်းကပ် လေ.လာ သင်ကြားရန် အထူး လိုအပ်ပေသည်။ နည်းပြဆရာ တို.၏ ညွှန်ကြားပြသမှု အတွေ.အကြုံ ကိုဆန်းစစ်၍ လိုက်ဖက် ကောင်းမွန်ရာများကိုေ၇ွးချယ် လေ.ကျင်.ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်း ၊စိတ်ဓာတ် တက်ကြွ ခိုင်မာခြင်းတို.သည် ထူးချွန်သော အားကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်ရေး အတွက် ရှိသင်. ရှိထိုက်သော အခြေခံ အချက်များပင် ဖြစ်သည်။ လေ.ကျင်.ခန်း လေ.ကျင်.နည်း တို.ကို အမြဲတန်း ပုံသေထား လေ.ကျင်.ပါက ပျင်းရိ ငြီးငွေ. လာတတ်သည်။ စိတ်မပါပဲ လေ.ကျင်.လျင် တိုးတက်မှု မရှိသည်.အပြင် အချိန်ကုန် လူပန်း အကျိုးယုတ်သော ရလဒ်များသာ အသားတင်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဆန်းသစ်သော လေ.ကျင်.ခန်းများ၊ အထောက်အကူ ပြု လေ.ကျင်.ခန်းများ၊ စက်ကိရိယာ လေ.ကျင်.ခန်းများ၊ စသည်ဖြင်. လေ.ကျင်.မှု အစီအစဉ် (Traning Programme) ကို အခြေအနေနှင်. လိုက်လျော ညီထွေ ပြောင်းလဲပေးရမည်။
မိမိ၏ ကြွက်သားများ တိုးတက် ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ရှုထောင်. အမျိုးမျိုးမှ ကြည်.ပြီး မှန်ကန် စနစ်ကျသော လေ.ကျင်.နည်း များကို စီစဉ် ရေးဆွဲနိုင်သော ဆရာကောင်း တစ်ယောက်အမြဲရှိဖို. လိုအပ်သည်။ နည်းပြဆရာသည် မိမိ လေ.ကျင်.ပေးသော တပည်.များ၏ အရည်အသွေး၊ တိုးတက်မှု အခြေအနေကို အစဉ်မပြတ် လေ.လာ သုံးသပ်ရပေမည်။ လေ.ကျင်. တည်ဆောက်မှု တိုးတက်စေရန် ဆရာနှင်. တပည်. ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွှင်.ပွှင်. လင်းလင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုသလို နည်းပြဆရာ အနေနှင်.လည်း ဟိတ်ဟန် ပြခြင်း၊ မာန်မာန ထားခြင်း၊ မရှိသင်.ပေ။ တပည်.များ အနေနှင်.လည်း ဆရာကို အထင်သေး လေးစားမှု မရှိသည်. အဖြစ်မျိုး ဘယ်တော.မှ မဖြစ်သင်.ဘူးလို. ထင်ပါတယ်။
အားကစားသမား တစ်ယောက်သည် ဆရာထံမှ အသိပညာရပ်များ တိုးပွားရရှိ၍ လာသည်နှင်. အမျှ ကိုယ်.ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိလာပြီး ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒ တင်ပြခွင်.ရရှိ၍ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွခိုင်မာပြီး အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင် သို. မရောက် ရောက်အောင် တက်လှမ်းလိုသော ဆန္ဒပြင်းပြ လာစေသည်။ ယင်းသည် ဆရာနှင်. တပည်.တို.၏ ရင်းနှီး လေးစားမှု ရလဒ်ပင် ဖြစ်သည်။
ကာယဗလ အားကစားနည်းသည် တစ်ဦးချင်း ကစားနည်း ဖြစ်သည်.အပြင် တစ်ဦးခြင်း ယှဉ်ပြိုင်ရသော အားကစားနည်း ဖြစ်သည်နှင်. အညီ တစ်ဦးကောင်း တစ်ယောက်ကောင်း ရွေးချယ် လေ.ကျင်.ပေးလျင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြီး အရည်အသွေး ပြည်.၀စေ၍ ပိုမို ထိရောက်သည်ကို တွေ.ရသည်။ ပုဂ္ဂလိက စီမံကိန်းနှင်. ကျစ်လစ် သိပ်သည်းသော ဆောင်ရွက်မှု တို.ကြောင်. ချန်ပီယံဘွဲ. ကို ကြာရှည် ထိန်းထားနိုင်ပြိး နည်းပြဆရာ၏ မျက်မှောက်တွင် လေ.ကျင်.လျင် အားကစားသမား၏ အခြေအနေမှန်ကို သိမြင်နေရမည် ဖြစ်သည်။
ထို.အပြင် နည်းပြဆရာနှင်. တပည်.တို.သည် နေ.စဉ် လေ.ကျင်.မှု မှတ်တမ်း ထားရှိပြီး တိကျ မှန်ကန်သော အချက်အလက်များ ရေးသွင်းနိုင်၇မည်။ နေ.စဉ် မှတ်တမ်းတွင် လေ.ကျင်.ခန်းများ၊ လေ.ကျင်.မှု အကျော.အကြိမ်၊ လေ.ကျင်.မှု ခံစားရ၍ စိတ်အား ထက်သန်မှု၊ မောပန်း နွမ်းနယ်မှုနှင်. ထိခိုက် နာကျင်မှု တို.အပြင် အိပ်စက်၍ ပျော်မပျော်၊ အစားအသောက် ခံတွင်း တွေ.မတွေ.စသည်. အချက်များ ကိုလည်း မကွယ် မ၀ှက် ထည်.သွင်း ရေးသား သင်.ပေသည်။
ဤသို. ရေးသားခြင်းသည် အားကစားသမား တစ်ယောက် အတွက်သာမက အခြားသူများ ဖို.လည်း အလွန် ကောင်းမွန်သော အလေ.အကျင်. တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လေ.ကျင်.ရေး မှတ်တမ်းစာအုပ် သည် နည်းပြဆရာ အတွက် အထူး လိုအပ်ပေသည်။ တပည်.တိုင်း၏ အခြေအနေ ကိုစိတ်ဖြင်. မှတ်သား၍ မရနိုင်ပေ။ မိမိတပည်.များ၏ နည်းစနစ် မှန်ကန်မှု လိုအပ်ချက်များကို ပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ပေးရာ၌လည်း ထိရောက်မှု အခြေအနေ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွမှုနှင်. အခြား စိတ်ဓာတ်ရေးရာများ စသည်. အားကစားသမား၏ လိုအပ်ချက်များကို စိစစ် သုံးသပ် မှတ်တမ်း ပြုစုထားရမည် ဖြစ်သည်။
လေ.ကျင်.မှု ပရိုဂရမ် ရေးဆွဲတတ်ခြင်းနှင်. နေ.စဉ် မှတ်တမ်း ရေးမှတ်ထားခြင်း တို.သည် နည်းပြဆရာကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ရေးအတွက် အထူးလိုအပ်ချက် ဖြစ်သလို ထိပ်တန်းရောက် အားကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ေ၇းအတွက်လည်း အထူး လိုအပ်သည်။အားကစားနည်း ပညာရပ် တစ်ခု တိုးတက် မြင်.မား လာဖို.ရန် လေ.ကျင်.ရေး နည်းပညာရပ်များ ခေတ်နှင်.အညီ တိုးတက် တီထွင် ဆန်းသစ်လာခြင်း၊ နည်းပြဆရာ ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာခြင်း၊ ရည်မှန်းချက် ဦးတည်ချက် များကို လုံ့လ ၀ရီယ ဇွဲသတ္တိတို.ဖြင်. ကြိုးပမ်း အားထုတ်လိုသည်. ထူးချွန်သော အားကစားသမား မျိုးဆက်သစ်များ ပေါ်ထွန်းလာခြင်း၊ လိုအပ်သည်. အကူအညီ အထောက်အပံ့များ ပံ့ပိုးပေးခြင်း တို.သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်။
သို.ဖြစ်၍ ကာယဗလ ကာယအလှ အားကစား နိုင်ငံတကာ အဆင်.မှီ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်း လာစေရန် နည်းပြဆရာနှင်. အားကစားသမား တို.သည် သဟဇာတ စွမ်းအားဖြင်. ခေတ်မှီ တိုးတက်သော လေ.ကျင်.ရေး နည်းပညာ လိုအပ်သလို တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှလည်း လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များ အသုံးပြုနိုင်၇န် အရေးကြီးကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါသည်။( နောက်ပိုင်းအလျဉ်းသင့်ပါက နည်းပြဆရာတို့ လေ့လာသင့် သိထားသင့်သည် အချက်များကို ဆက်လက်ရေးသားပေးပါမည်။)
တင်ဆက်သူ။ ။ အောင်အောင်(လှိုင်)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 09:12:00 AM No comments:
ဒီလို သက်သာအောင် လုပ်လို့ရ
(၁) နံနက်အိပ်ရာထ သောက်ရေ သုံးခွက် ဆက်တိုက် သောက်ပေးခြင်းက အူတွေကို အလုပ်လုပ်စေလို့ ဝမ်းသွားစေပါတယ်။ (နေ့စဉ် ရေရှစ်ခွက်မှ ၁၀-ခွက်အထိ သောက်တဲ့အကျင့်ကို မွေးမြူပါ)
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 09:02:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 09:00:00 AM No comments:
သင့်ဗိုက်သား ပြားချပ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် နည်း (၃) သွယ်
စိန်ခေါ်မှုများစွာ ကြုံတွ့နေရတဲ့ ခုခေတ်အချိန်အခါမှာ ဘယ်သူက ကိုယ့်ဗိုက်ကို ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပြားချပ်နေတာ မလိုချင်ဘဲ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ အထူးသဖြင့် Crop Top လို ခါးတိုအ၀တ်အစားလေးတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ခေတ်စားလာတဲ့ ဒီအချိန်မှာလေ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းနဲ့ပဲ သင့်ဗိုက်သားပြားချပ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၃)မျိုး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
(၁) ညမအိပ်မီ လေးနာရီအတွင်း အစာမစားပါနဲ့
အစာတွေစားပြီးပြီးချင်း တခါတည်း အိပ်ခန်းသို့ ချီတက် အိပ်စက်အနားယူလိုက်မယ်ဆိုရင် အစာချေဖျက်ပေးဖို့ သင့်တင့်တဲ့အချိန် မယူလိုက်ပဲ၊ နေ့အချိန်က ကိုယ်လက်လုပ်ရှားမှုပြုနေစဉ်အတွင်းက ကယ်လိုရီတွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးဖို့ အခွင့်ရအောင် အချိန်ကောင်း မပေးလိုက်ရာရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်က ကိုယ့်အပေါ်မှာသာ စုပြုံပြီး ဝမ်းဗိုက်ကဘေးဘက်ကို ကားထွက်လာတာ၊ ကြီးရင်း ပိုကြီးလာတာ တဖြည်းဖြည်း စတင် သတိပြုမိလာမှာဖြစ်တယ်။
ရေဟာ ကောင်းတဲ့ အချက်ဖြစ်သည်သာမက ဗိုက်ကို တကယ်ပြည့်နေတာထက်ကို ပိုတင်းနေရသလို ခံစားရစေမှာဖြစ်တယ်။ ထမင်းမစားခင် ရေတစ်ဗူးသောက်မယ် ဆိုရင် အစာအလွန် အကျွံ စားသုံး ချင်စိတ်ကို ရှောင်လွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ထမင်းစားပြီး ရေတစ်ဗူးသောက်ခြင်း အားဖြင့်လည်း ဗိုက်ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာမှု ရရှိခံစားလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကြောင့် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ခဏကြာလာရင် ချက်ချင်း သိသိသာသာ ပြန်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့် တာဝန်ပါ။ ဒီအလေ့အကျင့်ကို တစ်ခုချင်းစီ အတိမ်းအစောင်း မခံဘဲ အကုန်လိုက်နာဆောင်ရွက်လို့မှ သင့်ဗိုက်က ထင်သလောက်ပြားချပ် မလာဘူးဆိုပါဆို့။ တစ်နေ့ကို အကြိမ် ၅၀ လောက် ထပ်လုပ်ပေးနိုင်ရင် မဆိုးဘူးပေါ့။ အဲဒီလို လုပ်လို့ အကျင့်ရလာပြီဆိုတာနဲ့ သင့်တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားမှုမှာ ထူးခြားမှုရှိလာကြောင်း သိရှိလာပါလိမ့်မယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:58:00 AM No comments:
ညအိပ်ရာဝင်ခြေဆေးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
Credit : ကြေးမုံသတင်းစာ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:57:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:54:00 AM No comments:
သင့်ကိုယ်သင်မြင်တဲ့အမြင်က သူများတွေ သင့်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
သင်ကျရှုံးဖူးရုံ၊ မှားဖူးရုံနဲ့တော့ သင့်ကိုသင်စိတ်မပျက်သင့်ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကျရှုံးဖူးလို့ပါပဲ။ သင်အောင်မြင်ချင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အောင်မြင်
ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လိုချင်တာတွေမရတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်မပျက်သင့်ပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်
ဖြစ်ပေမယ့်အောက်ဆုံးထိကျသွားရင်တော့ ပြန်ဆွဲတင်ရတာခက်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင်
စိတ်ပျက်နေရင်အောက်မှာ ဖော်ပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင်ဘာလို့
စိတ်မပျက်သင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်(၈)ခုကို ဖော်
သင်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲရောက်ရောက်၊ ဘယ်လောက်ပဲအမှားတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ သင်သာကြိုးစားရင် သင့်မှာ
တိုးတက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေခဲ့တဲ့အမှား တွေရှိရင် နောက်
တစ်ခါ မမှားအောင်လုပ်ပါ။ အရင်တစ်ကြိမ်ကထက် တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
သင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့
လူသားအားလုံး အရာရာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်းလူတိုင်း အားနည်းချက် ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြပါ
တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်မှာမပြည့်စုံရင် အခြားသူတွေလည်း မပြည့်စုံဘူးဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
အမှားတစ်ခါလုပ်တိုင်းသာ သင်မမေ့ကြေးဆို သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ အခြားအရာတွေထည့်ဖို့နေရာ တောင်ရှိမှာ
အမှားလုပ်ဖူးတယ်။ စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။ အမှားဆိုတာ ပြန်သတိ မရနေရင်စကားလုံးတစ်ခုထက်မပိုဘူးတဲ့။
အမှားလုပ်ပြီးရင် ချက်ချင်းမေ့ပစ်ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားစကားပုံတစ်ခုကတော့ “အမှား
ကောင်းကို မဖြုန်တီးလိုက်ပါနဲ့။ အဲ့ဒိအမှားကနေ
တစ်ခုခုရအောင်ယူပါ”တဲ့။ အမှားတွေရှိရင် အဲ့ဒိအမှားကနေ
သင်ခန်းစာယူပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒိအမှား နောက်တစ်ကြိမ်
အလုပ်မရလို့၊ ချစ်သူနဲ့ကွဲလို့၊ အိမ်လေးတစ်လုံးတောင်
ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိလို့ အစရှိသဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲ နေရင်
မမေ့ပါနဲ့။ လူတိုင်းမနက်ဖြန်ကို မျှော်လင့်ခွင့်မရှိပါ
ဘူး။ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ ရောဂါဆိုးခံစားနေရသူတွေ၊
AIDS ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေ သူတို့လေးတွေ
ရော မနက်ဖြန်ကို သင့်လိုရဲရဲဝံ့ဝံ့မျှော်လင့်ရဲမယ် သင်ထင်လို့လား? မနက်ဖြန်တိုင်းမှာ သင်ပိုကောင်းတဲ့
အလုပ်တစ်ခုရသွားနိုင်ပါတယ်။ အရင်ချစ်သူထက် သင့်ကိုပိုချစ်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်လည်းရသွားနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာ အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ချက်ရှိပြီး အချိန်တိုင်း အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေက စိတ်ဓာတ်ကျမှုရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကို ဘယ်တော့မှာမခံပါဘူး။ သူတို့က ကျနေတဲ့
စိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲပြန်ကောက်တင် တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကို နိုင်အောင်တိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အောင်မြင်
ချင်ရင် လက်ဝှေ့သမားတွေကို အတုယူရပါမယ်။ လက်ဝှေ့သမားဆိုတာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့ မူးမေ့သွား
လောက်အောင်အထိုးခံဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူးဝေနေတဲ့စိတ်ကို
ပြန်စုစည်း ဒိုင်လူကြီးရဲ့ အမှတ်စဉ်ကိုသေချာ
နားထောင် ထိုးနေတဲ့ပွဲကဆက်ပြီး အနိုင်ရအောင် ထိုးရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ လောကကြီးမှာ အရှိုက်ကို
အထိုးခံရသလို မူးမေ့သွားလောက်တဲ့ လောကဓံတရားတွေ သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကသင်တစ်ယောက်ထဲ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိအချိန်ကျရင် သင့်ရဲ့စိတ်တွေကိုပြန်စုစည်းပါ။ သင်တိုက်နေတဲ့ပွဲကို နိုင်အောင်
ဆက်တိုက်ပါ။ ဘယ်တော့မှာ လဲကျတဲ့နေရာမှာပဲပျော်မနေပါနဲ့။ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်
သူတို့ကိုသူတို့ သူများတွေနဲ့ လိုက်နှိုင်းယှဉ်လို့ပါ
ပဲ။ သူများတွေက ရုပ်ပိုလှတယ်၊ပိုက်ဆံပိုရှာနိုင်တယ် စသဖြင့်ပေါ့။ နောက်ဆုံး ပြောရရင် Facebook ပေါ်မှာ
Likeပိုရတယ်ကအစ လိုက်မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ လူတွေက အများအမြင် ရှေ့မှာသာ ပျော်စရာတွေ၊ ကြွားစရာတွေ
ထုတ်ပြနေကြတာပါ။ သူတို့ထဲမှာလည်း စိတ်ဓာတ်ကျနေသူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင်
အခြားသူများကြောင့် သင်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြင်သင့်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ကို
ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကြောင့် ဘယ်တော့မှ မထိခိုက်ပါစေနဲ့။
တစ်ခါတစ်လေတောကျွန်တော်တို့အားလုံးကျရှုံးဖူးကြတာချည်းပါပဲ။ အမြဲတမ်းနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်သလို အမြဲတမ်း
လည်း ရှုံးမနေပါဘူး။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ကျရှုံးဖူးရုံနဲ့တော့ သင့်မျှော်လင့်ချက်တွေကို ရိုက်မချိုး လိုက်ပါနဲ့။ သင်
သင်ရောကျရှုံးဖူးပါသလား?အကယ်၍ ကျရှုံးဖူးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိအရှုံးထဲက ဘယ်လိုထွက်လေ့ရှိပါသလဲ?သင့်ရဲ့အမြင်တွေကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:50:00 AM No comments:
ဒေါ်ဦးဇွန်းသည် ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထမြောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဘိုးဘွားများ (ဝါ) လူအိုများ စောင့်ရှောက်ရေး လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာလူမျိုးများထံမှ ပထမဦးစွာ မျိုးစေ့ချခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။ ဒေါ်ဦးဇွန်းသည် တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင် တီပီအက်စ်ဘွဲ့ရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘိုးဘွားရိပ်သာများကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုကို `ဗွေဆော်ဦး´ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်ဦးဇွန်းတည်ထောင်ခဲ့သော ဘိုးဘွားရိပ်သာများမှာ -
မင်းကွန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ စစ်ကိုင်းမြို့ - တည်ထောင်သောခုနှစ်(၁၉၁၅-ခုနှစ်) ဖုန်းနံပါတ် ( ၀၂-၆၀၅၆၄)
သုဝဏ္ဏဘူမိ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ သထုံမြို့ - တည်ထောင်သောခုနှစ်(၁၉၂၃-ခုနှစ်) ဖုန်းနံပါတ် ( ၀၅၇-၄၀၁၅၃)
ပေါင်းတည် ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ပေါင်းတည်မြို့ - တည်ထောင်သောခုနှစ်(၁၉၂၉-ခုနှစ်) ဖုန်းနံပါတ် ( ၀၅၃-၃၈၁၅၆)
နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ရန်ကုန်မြို့ - တည်ထောင်သောခုနှစ်(၁၉၃၃-ခုနှစ်) ဖုန်းနံပါတ် ( ၀၁-၅၄၁၇၉၆၊ ၅၄၁၇၉၇)
ပခုက္ကူ ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ပခုက္ကူမြို့ - တည်ထောင်သောခုနှစ်(၁၉၃၇-ခုနှစ်) ဖုန်းနံပါတ် ( ၀၆၂-၂၁၀၂၄) တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူအိုရုံများ (မြန်မာ့ပထမဦးဆုံး ဘိုးဘွားရိပ်သာကို စစ်ကြိုခေတ်က သက်ကြီးရွယ်အိုများ စုဝေးနေထိုင်ရာဌာနဖြစ်၍ လူအိုရုံဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းမှ လူအိုရုံအစား ဘိုးဘွားရိပ်သာဟု ခေါ်ကြသည်။) ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဒေါ်ဦးဇွန်းသည် ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တွင် ရတနာပုံနေပြည်တော် (မန္တလေးမြို့)၌ အဘ ပိုးကုန်သည်ကြီး ဦးအိနှင့် အမိဒေါ်မျှင်တို့မှ ၁၂၃ဝ ပြည့်နှစ် (၁၈၆၈ ခုနှစ်) ဝါခေါင်လဆန်း (၅) ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သော တစ်ဦးတည်းသောသမီး ဖြစ်သည်။ ငယ်အမည်မှာ မဦးဇွန်းပင် ဖြစ်သည်။ လူထုဒေါ်အမာ၏ အစ်မကြီး နဂါးဒေါ်ဦးသည်လည်း ငယ်မည်မှာ မဦးဇွန်းပင်ဖြစ်သည်။ (ထိုခေတ်၌ မန္တလေးတွင် သမီးဦးမိန်းကလေး မွေးလျှင် မဦးဇွန်းဟု အမည်မှည့်လေ့ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် သမီးလေးကို ဦးခေါင်းဆံပင်အား ဦးစွန်းဖုတ်ကလေးထားပေးပြီး ချစ်စနိုးဖြင့် မဦးစွန်းဟုလည်း မှည့်ခေါ်တတ်ကြောင်း စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာက ပြောဆိုဖူးကြောင်း သိရသည်။) ဦးအိသည် အမရပူရမြို့ ရက်ကန်းစင်များမှ ပိုးထည်၊ ချည်ထည်တို့ကို အရောင်းအဝယ်ပြုသော ပိုးကုန်သည်ကြီး ဖြစ်ရာ ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝချမ်းသာသည်။ ရတနာပုံ နေပြည်တော်တွင် အိမ်ကြီးရခိုင်ဖြင့် နေထိုင်နိုင်သည်။ ရုပ်ရည်ရူပကာ လှပတင့်တယ်သည်နှင့်အမျှ စိတ်နေသဘောထားလည်း ထူးခြား မွန်မြတ်သူဖြစ်သည်။ ဒေါ်ဦးဇွန်း၏ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေသဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေဗိမာန်ထုတ် ‘ဖွားဦးဇွန်း’ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၌ ဤသို့ ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “သူမသည် ရုပ်ရည်လည်း လှပတင့်တယ်၏။ သို့သော် မာနထောင်လွှားခြင်းမရှိ၊ စိတ်နေသဘောထား အမူအကျင့် မွန်မြတ်လှသည်။”
မဦးဇွန်းကလေးသည် ငယ်စဉ်ကပင် သူတော်ကောင်းမိဘများ၏ သွန်သင်ချက်အရ ဘာသာရေးကို အထူးကိုင်းရှိုင်းသော အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ခုနစ်နှစ်အရွယ်ကပင် ပုပ္ဖာရုံကျောင်းအမဝိသာခါထုံး နှလုံးမူကာ နေ့စဉ် ငါးပါးသီလကိုစောင့်ထိန်း၍ ရှစ်ရက်သီတင်း လပြည့်လကွယ်တို့၌ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသောသီလကို အမြဲမပြတ် ဆောက်တည်ခဲ့လေသည်။ မိဘများအားလည်း မပြတ်လုပ်ကျွေးပြုစုလေသည်။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှစ၍ ဒေါ်ဦးဇွန်းသည် မိဘလုပ်ငန်းဖြစ်သော ပိုးကုန်သည်အလုပ်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ပိုးထည်အရောင်းအဝယ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြို့မြို့သို့ ကူးသန်းသွားလာရသောကြောင့် အမြို့မြို့၌ မိတ်ဆွေများရှိသည်။ လူပေါင်းဆန့်သည်။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသည်။ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီ မောက်ကြွားဝင့်ဝါခြင်းမရှိ ခြိုးခြံစွာကျင့်သုံးနေထိုင်၍ လှူသင့်လှူထိုက် ပေးသင့်ပေးထိုက်သူအားမူ ရက်ရောစွာပေးကမ်းတတ်သည်။ သို့ရာတွင် အိမ်ထောင်သားမွေးကား မပြုခဲ့။ အပျိုကြီးဘဝဖြင့် အရိုးထုတ်ခဲ့လေသည်။ မဦးဇွန်း ၁၇ နှစ်သမီးအရွယ်သို့ ရောက်သောအခါတွင်မှ သီပေါမင်း ပါတော်မူခဲ့လေသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:49:00 AM No comments:
၁) မိန်းကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ယောက်ျားလေးထက် သေး တယ် ဆိုသော်ငြားလည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ မှတ်ဥာဏ်က ယောက်ျားလေးထက် ၃%မြင့်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုအရ သိရ တယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးအများစုက ကိုယ့်ချစ်သူ
ပိုထက်တယ်လို့ ထင်မြင်စေအောင် လူအများရှေ့မှာ တုံးအချင် ဟန်ဆောင် တတ်ကြသည်။
၂) မိန်းကလေးတွေက ရေတာဖမ်းစက်နဲ့ တူတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာ လိမ်ဖို့ ကြိုးစားလို့ မရဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်မှာ ခန္ဓာစကား (body language) ကို နားလည်တဲ့ အစွမ်းရှိတာ ကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေကို ကိုယ်အမှုအရာတွေနဲ့
၄) မိန်းကလေးတွေက သူတို့မကျေနပ်တာ၊ စိတ်ညစ်တာတွေကို ရင်ဖွင့်တာဟာစိတ်ဖိအားကို လျော့စေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ ဆီကနေ အကြံဥာဏ်ရချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရင်ဖွင့်တာကို
၅) ယောက်ျားလေးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း စိတ်ခံစားမှုကိုစာစီပြီး မဖွဲ့နွဲ့ပြတတ်ဘူး။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို ကတ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ ကိုယ်ရေးဖို့နေရာမရှိအောင် စာတွေ
အများကြီးပါတဲ့ ကတ်ကိုပဲ ရွေးဝယ်တတ်ကြတယ်။
၁၁) ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ၁၅% ကနေ ၂၀% အထိလောက်က မိန်းကလေးဆန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းရှိပြီး မိန်းကလေးတွေမှာ ၁၀% လောက်သာ ယောက်ျားဆန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားလိင်တူ
ချစ်ကြိုက်နှုန်းဟာ မိန်းကလေးလိင်တူ ချစ်ကြိုက်နှုန်းထက် များခြင်းဖြစ်တယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:46:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:43:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:40:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/30/2015 08:39:00 AM No comments:
“၀စီကံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကိုအကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းပေးပါ ဘုရား။”
ဒိဝါတပတိဂါထာကို တပည့်တော်လည်း တစ်နေ့(၉)ခါ အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်ပါတယ် ဘုရား။အခုလို အကျယ်တဝင့်ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအနန္တပါဘုရား။
အခုတပည့်တော်မေးချင်တာကိုမေးခွင့်ပြုပါ။ကံ (၅)ပါး ရှိတဲ့အနက် လူတွေက ဝစီကံကို
အလကားရတယ် ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ပြောဆိုလေ့
ရှိပါတယ် ဘုရား။ ဝစီခံတစ်ခုကြောင့် မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝမှာထိခိုက်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ဘုရား။
ဒီအကြောင်းကိုလည်း အကျယ်တဝင့် ဟောပေးပါဦးအရှင်ဘုရား။ ရိုသေရို့ကျိုး ကျိုးနွံ့သော စိတ်ထားဖြင့်
လျှောက်ထားအပ်ပါသည် အရှင်ဘုရား။ ယမင်းသူ(ရန်ကုန်)
ကံငါးပါး ရှိသည့်အနက်ဆိုရာမှာ အရပ်ထဲမှာပြောပြောနေကြတဲ့ ပါဏာတိပါတ စတဲ့
ကံငါးပါးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါမယ်ထင်ပါတယ်။တကယ်က ပါဠိစာပေမှာတော့
“ကာယကံရယ်၊ ၀စီကံရယ်၊ မနောကံရယ်”ဆိုပြီးကံသုံးပါးပဲ ရှိပါတယ်။
အစ်မတော် မေးလိုရင်းက ကံသုံးပါးထဲမှာပါတော့ဝစီကံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဏာတိပါတ စတဲ့
သီလသိက္ခာပုဒ်ထဲက မုသာဝါဒနဲ့ဆက်စပ်ပတ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မုသာဝါဒ သီလသိက္ခာပုဒ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတောင်မြို့မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး
ရေးသားထားတော်မူတဲ့ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာထဲကစာသားလေးနဲ့ စလိုက်ပါမယ်။
လောက၀ယ် အလိမ်ခံရသော ဆင်းရဲလည်း“ပျော့ပျော့ နှင့် နံ”ဆိုသလို အတော့်ကို
အခံရခက်သော ဆင်းရဲတစ်မျိုးတည်း။ထိုအလိမ်ခံရသည့်အတွက် အကျိုးပျက်စီးရပုံတို့မှာ
မျက်မြင်အားဖြင့် ထင်ရှားရုံသာမက လိမ်သူကစွမ်းလှလျှင် နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို ပင်ရအောင်
လိမ်နိုင်ကြသဖြင့် မည်မျှလောက် နစ်နာကြသည်ကိုစဉ်းစားကြလေတော့။
ယခုခေတ် ဘာသာအမျိုးမျိုး၏ ဆရာအမျိုးမျိုးတရားတွေကြောင့် (ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရဆိုလျှင်)
မြော်မြင်မှန်းဆ၍ မကုန်နိုင်သော ဆင်းရဲကိုလည်းအမှားလမ်း လိုက်မိသူတိုင်း တွေ့ရတော့မည်။
ထို့ကြောင့် မုသာဝါဒမှ ရှောင်ကြဉ်မူသီလလည်းတစ်ယောက် နှစ်ယောက်မှစ၍ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့၏
ဒုက္ခကို မုချ စောင့်ရှောက်ရာရောက်ပေသည်။
(ဤနေရာဝယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ထဲမှ တချို့တရားဟောဆရာတွေ ညာနေပုံ၊ ဉာဏ်မရှိသူ
လူအများပင် ထိုအညာဆရာကို အထင်ကြီးပုံကိုပါစဉ်းစားကြပါလေ။)
(ကိုယ့်ကျင့် အဘိဓမ္မာ) လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာမှာ
မုသာဝါဒ= “လိမ်လည်ပြောဆိုတာဟာဘယ်လောက်ပြစ်များသလဲ” ဆိုတာ လူတိုင်း၊လူတိုင်း
တစ်ခါ မုသာဝါဒ= လိမ်လည်ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်ကြီးရေးသားထားတဲ့
“မုသားစကား၊ ပြောဆိုငြားမူ၊ စကားမပီ ၊သွားမညီတည်း၊ ပုတ်ညှီပါးစပ်၊ ခြောက်ကပ်ကိုယ်ရေ၊
ဣနြေ္ဒနောက် ၊ ပုတ်ယွင်းပေါက်၏၊မရောက်သြဇာ။နှုတ်လျှာ ကြမ်းထော်၊ လျှပ်ပေါ်လော်လီ၊
စိတ်မတည်သည်၊ ရှောင်ကြဉ်အပြန် အကျိုးတည်း၊”ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးကလဲ မှတ်သားဖွယ်ရာပါ။
အဓိပ္ပါယ်က လိမ်ပြောတဲ့သူများဟာ စကားမပီပါဘူးတဲ့။သွားလဲမညီမညာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သွားမညီမညာနဲ့ သွားခေါနေတဲ့သူတွေတွေ့ဖူးမှာအဲဒါဆိုရင် သေချာပါပြီ။
အရင်ဘ၀တွေတုန်းက လိမ်ညာပြောခဲ့တာများလို့ကောက်ချက်လို့ရပါမယ်။သွားတွေ ဘယ်လောက်တိုက်တိုက်၊သွားတိုက်ဆေးအကောင်းစားတွေ ဘယ်လောက်လောက်
သုံးသုံး ပါးစပ်က အပုတ်နံ့တွေလှိုင်နေရင် အဲဒီသူဟာလဲအလိမ်အညာတွေ များခဲ့လို့ပါပဲ။
အသားအရေလှပဖို့ လိုရှင်းတွေ ဘယ်လောက်သုံးသုံးအသားအရေတွေ မွဲမွဲခြောက်ခြောက် ဖြစ်နေရင်လဲ
အလိမ်အညာ၊ အပလီအခရာ တွေများခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာသေချာတာပါပဲ။
တစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ၊ အဖွဲအစည်းထဲမှာ၊ကိုယ့်အိမ်မှာ အသက်ကြီးပေမယ့် သြဇာအာဏာ
မသက်ရောက်ရင်လဲ အဲဒီလူဟာ အရင့်အရင်ဘ၀တွေကသူများကို လိမ်ညာခဲ့လုိ့ပါ။
စကားပြောတဲ့အခါ အများနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါ စကားလုံးတွေမယဉ်မကျေးနဲ့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောဆိုနေရင်၊
နေတာထိုင်တာ မယဉ်မကျေးရင် သေချာပါတယ်။အဲဒီလိုလူမျိုးဟာလဲ အရင့်အရင်ဘ၀တွေက
ပြောခဲ့တာလေးတွေကို ပိုပြီးထင်ရှားသွားအောင်ပေတ၀တ္ထုမှာလာတဲ့ ဇာတ်လမ်း လေးတစ်ပုဒ်နဲ့
ကျောင်းတော်မှာ သီတင်းသုံးနေတော် မူစဉ်မှာ၊ဂိဇ္ဈဂုတ်တောင်မှာသီတင်းသုံးတဲ့ အရှင်နာဒရက
မနက်စောစော ကိုယ် လက်သုတ်သင်ပြီးဆွမ်းခံကြွဖို့ သပိတ်ပြင်ပြီး တောင်ဆင်းလမ်းအတိုင်း
ကြွလာပါတယ်။လမ်းတစ်ဝက်အရောက်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကရွှေရောင်လိုဝါ၀င်းပြီး မျက်နှာကြတော့
၀က်မျက်နှာနဲ့ တူတဲ့ ပြိတ္တာတစ်ကောင်းကိုကိုယ်တိုင်မျက်မြင် တွေ့ပါတယ်။
တွေ့တော့ မထေရ်က“အိုပြိတ္တာ သင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ရွှေအဆင်းလိုဝါ၀င်းပြီး
အရပ်လေးမျက်နှာ ထွန်းလင်းနေတယ်။သင့်ရဲ့မျက်နှာကတော့ ၀က်လိုပါလား။
အရှင်နာဒရမေးတော့ ပြိတ္တာကပြန်ပြီး“မှန်လှပါ အရှင်နာဒရဘုရား တပည့်တော်သည်၊
စောင့်စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ၀စီကံ=နှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတဲ့ အမှုအကုသိုလ်တွေကို မစောင့်စည်းခဲ့ပါ။
လွန်ကျူးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် တပည့်တော်ဟာ အခုအရှင်ဘုရားမြင်နေရတဲ့အတိုင်း ကိုယ်မှာတော့
ရွှေရောင်အဆင်းလို လင်းနေပြီး၊မျက်နှာဟာဝက်နဲ့တူနေရတာပါ ဘုရား” လို့
ပြန်လည်လျှောက်ထားပါတယ်။တစ်ခါ ပြိတ္တာက ဆက်ပြီး
“အရှင်ဘုရား အခုအရှင်ဘုရားမျက်မှောက် ထင်ထင်တပည့်တော်အဖြစ်ကို တွေ့မြင် နေရပါပြီ။
နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မကောင်းမှုတွေကို မပြုပါနဲ့။၀က်မျက်နှာလို မဖြစ်စေပါနဲ့ အရှင်ဘုရားလို့”
ပြောပြခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကို ပြန်ကြည့်ရင်“၀စီဗေဒ ထိတိုင်းရှ”ဆိုသလိုပါပဲ။
၀စီဗေဒကြောင့် ၀က်မျက်နှာကြီးနဲ့ တူနေရပါတယ်။ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ ၀စီကံကို ရှောင်ရှားနိုင်ရင်
၀စီကံဆိုတော့ ၀စီကံနဲ့ဆက်စပ်တာလေးတွေ ဆက်ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။
၀စီကံက “လေးမျိုး” တောင် ရှိပါတယ်။
❖(၁)။ မုသာဝါဒ= လိမ်ပြောတာ၊
❖(၃)။ဖရုသ၀ါစာ= စကားလုံး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေပြောဆိုတာ၊
❖(၄)။သမ္ဖပ္ပလာပ= အကျိုးမဲ့ရှိတဲ့ စကားတွေပြောနေပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတာ။
မုသာဝါဒ= လိမ်ပြောတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကအထက်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။
ပိသုန၀ါစာ = ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာ ချစ်သူ
အချင်းအချင်းသွေးခွဲတာ၊ သူငယ်ချင်းအချင်းအချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွဲသွားအောင်
ဖရုသ၀ါစာ= စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေ ပြောတာကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါ။
ငါးစိမ်းသည်တွေလို အော်ကြီးဟစ်ကြယ် ပြောဆိုတာ။ခုနှစ်အိမ်ကြား၊ ရှစ်အိမ်ကြား ပြောဆိုတာတာတွေပေါ့။နောက်တစ်ခါ ဆဲရေးတိုင်းထွာတာတွေလဲပါပါတယ်။
သမ္ဖပ္ပလာပ= အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေ ပြောနေတာကတော့
လောကုတ္တရာနဲ့ ဘောင်မ၀င်တဲ့ စကားတွေပါ။ဟိုမင်းသမီးလေးက ဘယ်လိုလေ၊
ဟိုမင်းသားလေးက ဘယ်သူနဲ့တဲ့။ကိုရီးယားမင်းသားလေး က ဘယ်လိုစတဲ့
ခုပြောပြပေးခဲ့တာတွေက ၀စီကံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ အကုသိုလ်တွေပါ။
(၃)။စကားလုံးကြမ်းကြမ်းနဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့စကားတွေမပြောပဲ ချိုချိုသာသာပြောမယ်။
(၄)။အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေမပြောဘဲ၊အကျိုး ရှိတာတွေပြောဆိုမယ်။
ကောင်းတာတွေ ဖြစ်လာမှာပေါ့။ရှေးသူဟောင်းများ ပြောသလိုပါပဲ။
“ချစ်စေလို ခံတွင်းလက်လေးသစ်၊မုန်းစေလို ခံတွင်း လက်လေးသစ်” တဲ့။
ကောင်းအောင်လုပ်တာလဲ ဒီလက်လေးသစ်ရှိတဲ့လျှာလေးပါပဲ။ဆိုးအောင် လုပ်နေတာလဲ
❖(၁)။ဒါကြောင့် ပြောတော့မယ်လို့ ကြံတိုင်း အရင်ဆုံး၊“ငါပြောမယ့် စကားတွေဟာ ငါ့အတွက်၊ ဒါမှမဟုတ်
သူ့အတွက်၊ ဒီလိုမှမဟုတ် ငါရော၊သူရောနှစ်ယောက်လုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ စကားလား၊
အကျိုးမဲ့မယ့်စကားတွေလား” လို့ စဉ်းစားလိုက်ပါ။အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပြောလိုက်ပါ။
❖(၂)။နောက်တစ်ခါ ပြောနေတုန်းမှာလဲ“ငါပြောနေတဲ့ စကားတွေဟာ သူ့အတွက်၊
ဒါမှမဟုတ် ငါ့အတွက်၊ ဒီလိုမှမဟုတ် သူရောငါရောနှစ်ယောက်လုံးအတွက် အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေလား။
အကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေလား၊”စဉ်းစားလိုက်ပါ၊ အကျိုးများမယ်ဆိုရင် ပြောလိုက်ပါ။
❖(၃)။နောက်ဆုံး ပြောပြီးသွားပြန်ရင်လဲ“ငါပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေဟာ ၊ ငါ့အတွက်၊
ဒါမှမဟုတ် သူ့အတွက်၊ ဒီလိုမဟုတ် ငါရောသူရောနှစ်ဦးလုံးအတွက် အကျိုးများခဲ့သလား၊ အကျိုးမများပဲ
အလကားစကားတွေလား”လို့ ပြန်တွေးလိုက်ပါ။တကယ်လို့ အကျိုးများရင် အသာထားလိုက်ပါ။
အကျိုးမများ အလကားဆိုရင် ကိုယ်ပြောပြီးသားစကားတွေကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါ။
ဒီလိုလေးတွေ လိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ပါရင်ဝစိဗေဒ ထိတိုင်းရှကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မည်
[ကျမ်းကိုး- ရာဟုလောဝါဒ သုတ္တန်၊ခုဒ္ဒကနိကာယ် သုကရမုခပေတ၀တ္ထုပါဠိတော်၊
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:37:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:31:00 AM No comments:
Email အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာ မလုပ်သင့်တဲ့ ရှောင်ရမယ့် အရာတွေ
၁။ Email ပြန်စာကိုဘာမှရှင်းမပြပဲ စကားလုံးတစ်လုံးလောက်နဲ့ပြန်ပို.တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ စကားစဖြတ်ချင်လို. တစ်လုံးလောက်ပဲရေးပြီး ပို.တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိူင်ပေမယ့် Email ကျင့်ဝတ်အရ ဒီလိုလုပ်တာရိုင်းပါတယ်။
၂။ လုံးဝပြန်စာမပို.ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကို စကားလာပြောတဲ့သူကို မျက်နှာလွှဲလိုက်သလိုပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ စာပြန်သင့်ပါတယ်။
၃။ ခပ်တိုတို ခပ်ပြတ်ပြတ် ရေးတာ လူတော်တော်များလုပ်ကြပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ အဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျိုးအကြောင်းလေးတွေပါ ထည့်မရေးဘူးဆိုရင် နားလည်မှုလွယ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာလေးတွေ ဖြစ်လာနိူင်တယ်။
၄။ ကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီ Email ကို နောက်ထပ် လူအယောက် ၂၀ကို ဆက်ဖြန့်ပေးရင် ကံကောင်းမယ်။ delete လုပ်လိုက်ရင် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမယ် ဘာမယ်နဲ့ လူအများဆီ email တွေဆက်ပို.ခိုင်တဲ့ chain mail တွေပါ။ ဒါတွေဟာ ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာတွေပါ၊ စာဖတ်သူ အဲ့ဒီEmail ကို delete လုပ်လိုက်လဲ ဘယ်သူသိတာမှတ်လို.။
၅။ Email နဲ့ လိမ်ညာပြောမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်က စာဖတ်သူရဲ့Email ကိုင်ပြီး ကိုယ်လိမ်တာ
၆။ ဖတ်စရာ ပြန်စရာတွေ email တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်ရတဲ့ အထဲ ကခုန်နေတဲ့ ကာတွန်းကြောင်ကလေးကို ဘယ်သူမှ မကြည့်ချင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ email ပရိုဂရမ်တစ်ချို့မှာလည်း animation တွေဖွင့်လို.မရပါဘူး။
၇။ Email နဲ့ အလုပ်ဖြုတ်စာရေးတာ တရားဝင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးတွေတွေ့ဖူးပါတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အလုပ်ဖြုတ်စရာရှိလာရင် တွေ့ဆုံပြောဆိုပြီး ရုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
၈။ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး ကိုရပ်စဲလိုက်ပြီလား။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စုံညီအစည်းအဝေးခေါ်ပါ။ email မပို.ပါနှင့်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:30:00 AM No comments:
သင့်ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ဖဲ့ပေးပြီး ပေါင်းရလောက်အောင် မထိုက်တန်တဲ့ သူငယ်ချင်းအမျိုးအစား (၇)မျိုး
ကိုယ်ပေါင်းသင်းနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေ ဖဲ့ပေးပြီး ပေါင်းသင်းလောက်ရအောင် မထိုက်တန်တဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေအတွက် အချိန်ပေးမယ့်အစား အခြားအကျိုးရှိမယ့် အရာတစ်ခုခုကို လုပ်လိုက်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လို သူငယ်ချင်းမျိုးတွေက သင့်အတွက် အချိန်ကြာလေ စိတ်ပျက်စရာကောင်းစေလိမ့်မလဲဆိုတာ ပြောပြပေးရရင်တော့
၁။ကိုယ့်အစီအစဉ်တွေကို မသိမသာ လိုက်ဖျက်နေတတ်သူ
တစ်ခါတစ်လေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဟုတ်ပဲ ချစ်သူနဲ့တွေ့ရမယ့်အချိန် ကိုယ့်ဆီ ဘွားခနဲပေါ်လာပြီး ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာလုပ်မယ် အတင်းကြီး လိုက်စီစဉ်ပစ်လိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မိသားစုကို အချိန်ပေးမယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကို အပြင်အတင်းခေါ်ထုတ်သွားတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးပေါ့။ ကိုယ်စီစဉ်ထားတာတွေ သိရဲ့နဲ့ ကိုယ့်ကိုသူနဲ့အတူ အဖော်လိုက်ပေးဖို့၊ အချိန်ဖြုန်းပေးဖို့ အတင်းပြုမူလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးဟာ တကယ်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သူပါ။ သူဟာ ကိုယ့်အပေါ် ဘာလေးစားမှု၊ နားလည်မှုမှ ပေးနိုင်မယ့်သူ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။
သင်က သင့်အကြောင်း တစ်ခုခု ပြောလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ ဥပမာ နောက်တစ်ပတ်ကျရင် တစ်နေရာရာကို ခရီးသွားမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သူက ကိုယ့်အကြောင်းဆက်နားမထောင်တော့ပဲ သူအဲ့ဒီနေရာကို ဘယ်တုန်းကရောက်ပြီး၊ ဘာတွေလုပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဆက်တိုက်ပြောဆိုနေတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုး၊ ကိုယ့်အကြောင်း နည်းနည်းလေး စမပြောလိုက်နဲ့ ကိုယ်က ပြောရမယ်မရှိပဲ သူချည်း ဖိပြောနေတတ်တာမျိုးဟာ အတော်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတာပါ။ အထူးသဖြင့် သူဟာ တစ်ဖက်လူစကားကို အလေးပေးနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံအသိလေးတောင် မရှိပါဘူး။
၃။သူနဲ့အတူ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးကြည့်ဖို့ ကိုယ့်ကိုအတင်းဖိအားပေးတတ်သူ
သူနဲ့မတွေ့လိုက်နဲ့၊ တွေ့တာနဲ့ သူသုံးတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုခုကို သူနဲ့အတူသုံးဖို့ သင့်ကို ဖိအားပေးတတ်သူဟာ မပေါင်းအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ အနည်းဆုံးတော့ သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ ရှိသင့်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
၄။ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူကို ကိုယ်ကြိုက်နေမှန်းသိသိရက်နဲ့ အတင်းလိုက်ကပ်နေတဲ့ သူ
သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို တစ်ယောက်နာကျင်အောင်တော့ မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အချစ်ရေးမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ့်သူငယ်ချင်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူကို ကိုယ်ကသိသိရက်နဲ့ အတင်းလိုက်ရော၊ လိုက်ကပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကြိုက်အောင် လုပ်တာမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မလုပ်သင့်၊ မဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ။
၅။သင့်ဘ၀အတွက် အခက်အခဲကြီးကြီးမားမား ရှိနေချိန် သင့်ကို အဖက်တောင် မလုပ်တဲ့သူ
ဘ၀အတွက် အပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့် အရာတွေ သင်လုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် အခက်အခဲတွေကြုံနေရချိန် သင့်ဘေးမှာ မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ သင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေချိန်တောင် သင့်ဆီ ရောက်မလာနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးကိုတော့ သင့်စိတ်ထဲမှာ ဘာလို့အရေးပေးနေတော့မှာလဲ။
၆။ သူနဲ့မခင်တဲ့ သင့်ရဲ့အခြားသူငယ်ချင်းတွေကို အမြဲအပြစ်ပြောဆိုဝေဖန်တတ်သူ
လူတိုင်းဟာ တွေ့လိုက်တာနဲ့ကို ခင်မင်ရင်းနှီးသွားရမယ်လို့ မဟုတ်ပေမယ့် သူကတော့ အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားသက်သက်ဖြစ်နေတာပါ။ အထူးသဖြင့် သင့်ရဲ့အခြားသော သူငယ်ချင်းတွေကို သူကြည့်မရတာမျိုး၊ သင့်အလုပ်ကလူတွေဆို အကောင်းမပြောတာမျိုး၊ သူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူဆိုလို့ သင်ကလွဲပြီး အခြားမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
၇။သင့်ကို မနာလိုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် ဘယ်တော့မှ ပျော်ရွှင်မပေးနိုင်သူ
သင်တစ်ခုခုကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်တိုင်း သူ ဘယ်တော့မှ ချီးမွမ်းပြောဆိုတာမျိုး မရှိပေမယ့် မျက်နှာပျက်သွားတာမျိုးတော့ အခါခါပါ။ အဲ့ဒီအချိန် သင်နဲ့စကားမပြောချင်တော့သလိုလို လုပ်ပစ်တာမျိုးလည်း သင်ကြုံရနိုင်ပါ တယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး သင်နဲ့အတူ လိုက်ပြိုင်နေတယ်လို့ ခံစားရရင်တော့ သူငယ်ချင်းစာရင်းကသာ အမြန်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:27:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:26:00 AM No comments:
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် သိသင့်သော အရာများ (ယောကျာ်းလေးများအတွက်)
၁။ စီးပွားရေးကို အလေးထားပါ
တချို့လူတွေက ပြောကြတယ် ပိုက်ဆံ၇ှိတိုင်း အကုန်လုပ်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့၊ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံမရှိရင်ရော ဘ၀ဟာ ကျေနပ်စရာ တွေနဲ့ ပြည့်စုံပါ့မလား…. ။ဒါကြောင့် အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် သင့်ရဲ့ အားအင် အများစုကို သင့်ဘ၀ရဲ့အလုပ်မှာ မြှုပ်နှံပါ။ အလုပ်မှာ ဘ၀တိုးတက်ဖို့အတွက် ကြံဆနေပါ။
၂။ ပိုက်ဆံမျက်နှာ သိပ်မကြည့်ပါနဲ့
အလုပ်မှာ လစာ နည်းတယ်ဆိုပြီး စောဒက မတက်ပါနဲ့။ ဘဏ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံပမာဏဟာ ဂဏန်း ၄ လုံးလောက်ပဲ ရှိပါလား ဆိုပြီးသောကရောက်မနေပါနဲ့။ အနာဂတ်ကို ကြိုပြီး စိတ်ပူမနေပါနဲ့….ပင်ပန်းပါတယ်။ အခုလက်ရှိလုပ်ရမှာက ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက်လေ့လာ သင်ယူပါ…. သင့်မှာ တကယ်လို့ ဘွဲ့ ဒီဂရီ တခု ရှိထားတယ်ဆိုရင်သင်သိထားတဲ့ သဘောတရား သီအိုရီ တွေကို လက်တွေ့ဘ၀မှာအသုံးချဖို့ကြိုးစားပါ။ ရေရှည်စီမံကိန်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူပါ…. အလုပ်ဟာတကယ်တော့ အခမ်းနားဆုံး ကျောင်းတော်ကြီးပါပဲ။ အဲဒီအလုပ်ကပဲသင်လေ့လာခဲ့တာထက်ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံတွေ အတွေးအခေါ်တွေကိုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်… ပညာမပြည့်စုံသေးရင် စိတ်မပူပါနဲ့ဆက်တိုက်သင်ယူနေပါ…. ပိုက်ဆံမျက်နှာ တခု ထဲကို မကြည့်နေပါနဲ့။အသက်၃၀မတိုင်ခင် ကိုယ်ပိုင် တိုက်တွေကားတွေ ၀ယ်နိုင်တဲ့ သူဆိုတာရှားပါတယ၊်။
၃။ မိဘတွေကို စာနာ နားလည်ဖို့ကြိုးစားပါ
မိဘတွေ ဆုံးမတဲ့ အရာတွေကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့…. သူတို့ကို စာနာနားလည်ပေးပါ… သင်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အရွယ်ရောက်ရောက် သူတို့ရဲ့မျက်လုံး ထဲမှာ သင်ဟာ ကလေးပါပဲ… သူတို့ကိုပျော်ရွင်အောင်ထားပါ။မတတ်နိုင်ရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ဖုန်းဆက်တာ၊ လက်ဆောင်လေးတွေပေးတာ တွေက သူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ် ၊ သူတို့ စိတ်ပျော်၇ွင်ရင် သင့်မှာလဲ ကောင်းတာတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၄။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပါ
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘ၀မှာ အရေးပါပါတယ်….ကိုယ်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲ ပေါင်းတဲ့ မိတ်ဆွေမျိုးတွေချည်းနဲ့ပဲသင့်အချိန်ကို မကုန်ပါစေနဲ့…. အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်အခက်အခဲရှိတဲ့အချိန်မှာ ကူညီနိုင်မှသာ မိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်တယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါ…. သူတို့တွေ ဆင်းရဲ သည်ဖြစ်စေ…ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရင် ပေါင်းသင်းပါ၊
၅။ အချစ်ကို မကိုးကွယ်ပါနဲ့
အချစ်တွေ သင့်ရင်ထဲမှာ ဖြစ်လာရင် ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားပါ။ ချစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်… လောကမှာ အချစ်အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့သူတွေပြောစကားကို နားမယောင်ပါနဲ့ …. တကယ်ကတာဝန်ယူနိုင်စွမ်းကသာ အရေးပါတာပါ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကိုနားလည်ဖို့ခက်ပါတယ် … သင်လုပ်ရမဲ့ အလုပ်က လက်တွဲချိန်တွဲ ….လက်တွဲ ဖြုတ်သင့်ရင် ဖြုတ်ဖို့ပါပဲ။ အသက်၃၀ မတိုင်ခင် အချစ်ဟာအတုအယောင်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့် သူတို့ဟာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ့ချို့တဲ့နေပါတယ်၊ အရင်ဆုံးလေ့လာ သင်ယူသင့်ပါတယ် … မျက်စိမှိ်တ်ပီးမယုံသင့်ပါဘူး၊
၆။ အနမ်းတော့ ရှိနိုင်ပါတယ် စိတ်မပူပါနဲ့
အချစ်ဆိုတာ အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်ပေမဲ့ အရေးတော့ပါပါတယ် ။လူအများစုက အသက် ၂၀ ကျော်လို့မှ ချစ်သူရည်းစားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တဘ၀လုံးပဲ လူပျိုကြီးဘ၀နဲ့အရိုးထုတ်ရချည်ဆိုပြီး
ကြောက်လန့်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက်မိန်းခလေးတွေက ပိုပြီး ပူပန်တတ်ကြပါတယ်၊ အသက် ၃၀အရွယ်ယောက်ျား တယောက်ဟာ တက်သစ်စပန်းတပွင့်နဲ့တူပါတယ်၊ကြွေကျဖို့ထက် ပွင့်လန်းဖို့ ပိုပြီး အားသန်နေပါတယ်… ရင့်ကျက်တဲ့ယောက်ျား တယောက်မှသာ အချစ်ဆိုတာကို ရေရှည်တန်ဖိုးထားတတ်မှာပါ။ .. ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေကို ရယူဖို့အတွက်ရူးရူးမူးမူး ကြိုးစားနေမဲ့ အစား အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်မှာတယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့ အရသာကို ခံစားပါ။
၇၊ အကုန်လုံးကို မလုပ်ချင်ပါနဲ့
သင့်မှာ အွန်လိုင်း ဂိမ်း ကစား တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်တာ …ဓာတ်ပုံရိုက်တာ စသဖြင့် ၀ါသနာတွေ၇ှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကျောင်းမပြီးခင် အချိန်အထိတော့ အချိန်ပေးလုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ် …. ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြီးလို့ အခုလို အလုပ်ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ အဲလိုဝါသနာတွေအတွက် အချိ်န်နဲ့ စွမ်းအင်တွေ အားစိုက်မှူတွေ လုပ်ဖို့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး… စိ်တ်ဝင်စားမှု ၀ါသနာဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်…. ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတာ မကြီးတာကို ခွဲခြားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ …အကုန်လုံးကို လုပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး…
၈။ လူငယ်ဆိုတာ မဆုံးရှုံးပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဟာ စ်ိတ်ပူပန်စရာတွေနဲ့ ကြုံလာရင်စိတ်ပျက်အားငယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲလိုအချိန် လူငယ်တွေမှာအကောင်းမြင်သဘောထား၇ှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားရင် အစက ပြန်စပါ…မှားယွင်းသွားရင် နောက်တခါ ထပ်မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ…အရှုံးပေးတာဟာ ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမူပါ။ အစွန်ဆုံးထိ အရှုံး မပေးပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပါ.. အမှားတခုဖြစ်ပြီး ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိတ်မှာပဲအဆုံးမသတ်လိုက်ပါနဲ့… ထပ် ကြိုးစားလို့ အောင်မြင်ရင်အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်….
၉။ လူတွေကို အားကျပါ ဒါပေမဲ့ အတုမခိုးပါနဲ့၊ ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာထား ဆက်ဆံပါ
လူတွေမှာ အားကျစရာ လူတွေရှိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ ကိုယ်နေပါ…သူတို့ကို အတုခိုးပြီးလိုက်လုပ်တာ ပင်ပန်းပါတယ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ သင်ပါပဲ …. ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင် လဲ မဝေဖန်ပါနဲ့လူတွေမှာ သူတန်ဖိုးနဲ့ သူ၇ှိကြပါတယ်… သူတို့ကို နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်ခံနိုင်ဖို့ အားထုတ်ပါ၊
၁၀။ တာဝန်ယူ စ်ိတ် ၇ှိပါစေ
အရင်တုန်းက ဘာတွေပဲ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ၊ လုပ်ခဲလုပ်ခဲ့ အခုအချိန်က စပြီးမှန်ကန် ယုံကြည်ရတဲ့ လူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ…. ယောက်ျားလေးတွေဟာအလုပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘ၀မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တာဝန်ယူတတ်တဲ့စိ်တ်ရှိဖို့လိုပါတယ်…. ဒါမှ လူတွေက သင့်ကို ယုံကြည်ကြမှာပေါ့…နောက်ဆုံး အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးတဲ့ နေရာမှာတောင် မိန်းကလေးတွေဟာတာဝန်ယူရဲတဲံ ယောကျာ်းလေးတွေပဲ ရွေးချယ်ကြတယ်မဟုတ်လား။
၁၁၊ ယောကျာ်းလေးတွေမှာ အဆင်းက အရေးမပါပါဘူး
ရုပ်ရည် ချောမောမှုကို ဦးစားမပေးပါနဲ့ ။ ကြင်နာတဲ့ နှလုံးသား၊ သန့်၇ှင်းတဲ့စိတ်.. ရိုးသားတဲ့ ဂုဏ်အင်တွေက ပိုပြီး အရေးပါပါတယ်..လူတွေကရုပ်ချောတဲ့ လူထက် မညစ်ပတ်တဲ့ သူကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ တကယ်လို့ရုပ်ချောတာမှ ကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သူတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ရင် အလေးမထားပါနဲ့…ဒီလိုလူမျိုးတွေက အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ၊
၁၂၊ ကိုယ်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ သင်ယူထားပါ
ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အ၇က်သောက်တာ၊ ညဘက် နောက်ကျမှ အိပ်တာတွေက အခုအချိန်မှာတော့ အရေးမကြီးဘူးဆိုပြီး ဆက်လုပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့… အခုအချိန်မှာ မသိသာပေမဲ့ ၃၀ ကျော်လာတဲ့အခါမှာ သိသာကွာခြားသွားပါတယ် …. ဘ၀မှာ ရှင်သန်ဖို့ အတွက် ကျန်းမာဖို့ လိုပါတယ်… မကျန်းမာရင် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်ကျန်းမာဖို့ကြိုးစားပါ…. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပါ။
အခုအချိန်အထိသင်ဟာ အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပီးစိုးရိမ်မနေပါနဲ့ …. အလုပ်ကို ပုံမှန်လုပ်ပြီး အသိပညာကိုသာ လေ့လာပါ…သင်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်ကို လုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကိုလှမ်းယူပါ…
၁၄။ အလုပ်ကို ဂရုတစိုက်လုပ်ပါ
အခုလက်ရှိအလုပ်ဟာ ပျင်းစရာ ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်း…ဘယ်လောက်ပဲ နိမ့်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေ…အစွမ်းကုန်အားထုတ်လုပ်ဆောင်ပါ…. အောင်မြင်တဲ့လူဆိုတာအသေးအဖွဲအလုပ်တွေက စခဲ့ကြတာပါ၊ အဓိကက အလုပ်မှာ ထားတဲံစိတ်ထားနဲ့ အလုပ်သဘောတရားလေးတွေကို နားလည်ဖို့ကသာအနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
၁၅။ စစ်မှန်တဲ့ ခံစားမှု တွေကိုပဲ အလေးပေးပါ
မိန်းကလေးတွေကို ဖိနပ်လဲစီးပေးနိုင်တဲ့ ၊ အ၀တ်အစားလှလှလေးတွေဝယ်ပေးနိုင်တဲ့ သူတွေကို မနာလို မဖြစ်ပါနဲ့ … သင့်အတွက်အချိန်ကုန်ပါတယ်… မိန်းကလေး တွေ အစိုးရိမ်ဆုံး က ချစ်သူရှာမတွေမှာ မဟုတ်ဘူး….ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်အပေါ် အချစ်တွေ ကုန်ခမ်းသွားမှာကို ပဲ။ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတလုံးက သာ သင့်ချစ်သူကို ပျော်ရွင်မှုတွေ အမှန်တကယ်ရရှိစေပါတယ်..လောကမှာတခြားသူထက် ပိုပေးနိုင်တာထက် စစ်မှန်တဲ့ခံစားမှု အကြင်နာကသာ အောင်မြင်ခြင်းကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်…
၁၆။ အပြစ်ကင်းတဲ့ ကလေးလို စိတ်မျိုး နည်းနည်းတော့ ထားပါ
တခါတလေမှာ ကလေးဆန်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စိတ်သဘောထားလေးကိုထားတတ်ဖို့လိုပါတယ် … အပြစ်ကင်းတာ တုံးအတာ မဟုတ်ပါဘူး…ဖြူစင်တာပါ… စိတ်ထား ဖြူစင်မှသာ တကယ်ပျော်ရွင်မှုကို သင်ရရှိမှာပါ…ဘ၀မှာ အောင်မြင်တာ ကျရှုံးတာ မပြည့်စုံတာ အစရှိတဲ့ လောကဓံတွေကိုဖြူစင်တဲ့ စိတ်ထားလေးနဲ့ ကြည့်ပြီး ပျော်ရွင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ ..
Credit: Hla Htay Oo
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:21:00 AM No comments:
ဆုံးမတဲ့အချိန်က စပြီးတော့ မွေးသမိခင်ကို ပြုစုခဲ့တာ … ဖြူတာကို မည်းတယ်လို့ သူက ပြောလဲပဲ ဆန့်ကျင်ဘက် မပြောခဲ့ဘူး၊ ရယ်ပြီးတော့ နေခဲ့တယ်၊ မည်းတာကို ဖြူတယ်လို့ ပြောရင်လဲပဲ သူ့ကို ဆန့်ကျင်ဘက် မပြောဘူး၊ ရယ်ပြီးတော့ နေခဲ့တယ်။
ထို့အတူ ဘုန်းကြီးများ ရန်ကုန်မြို့ လာတဲ့အခါ ဒိပြင် ဘယ်မှ မဝင်ပေမယ်လို့ စာပေဝါသနာပါတော့ စာရွက်စက္ကူရောင်းတဲ့ဆိုင်တော့ ဝင်တယ်။ အဲ သိမ်ကြီးဈေးဘက် အထည်ဆိုင်နားရောက်ရင် ကြည့်ပြီးတော့ … သြော် ဒီအဆင်တော့ ငါ့အမေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အဆင်ပဲ´ဆိုပြီးတော့ ခါးဝတ်တစ်ထည် အင်္ကျီလေးတစ်စုံ ဒီလိုယူပြီး ကပ္ပိပြီးတော့ သူ့ကို ပေးရင် သူ့စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်တယ်။ တခါတလေ မိမိစိတ်ထဲမှာ … သြော် ဒီအဆင်ဟာဖြင့် ငါ့မိခင်နဲ့ သိပ်တော်တဲ့အဆင်ပဲ ဆိုပြီးတော့ ခါးဝတ်နှစ်ထည် အင်္ကျီနှစ်ထည် နှစ်စုံယူသွားရင် ဘာပြောသလဲ၊ `ဒီလောက် များများကြီး ဒကာမကြီး ဘယ့်နှယ်လုပ် ဝတ်နိုင်မှာတုန်း´ သူက ပြောတယ်။
`ကိုရင် … မိဘကို လုပ်ကျွေးဗျား၊ ဘုန်းကြီးအသက် ၂၄-နှစ်အရွယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးအကျိုးလိုလားတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးက ဆုံးမဖူးတယ်။ ဦးဇင်း မိဘကို ရိုရိုသေသေ လုပ်ကျွေး၊ မိဘက ဖြူတယ်ဆိုရင် ဖြူလိုက်၊ မည်းတယ်ဆိုရင် မည်းလိုက်၊ ကိုယ်က ဝါးလုံးလို့ သိရက်သားနဲ့ မိဘက ဝါးခြမ်းဆိုရင် ခြမ်းလိုက်ဗျာလို့ သြဝါဒပေးခဲ့တယ်။ ဘုန်းကြီးလဲ အသက် ၂၄-နှစ်ကတည်းက မယ်တော်ကြီး ကွယ်လွန်သည်အထိ ဒီအဆုံးအမအတိုင်း လိုက်နာခဲ့တယ်။ ယခုလဲ ကိုရင် မိဘကို လုပ်ကျွေးဗျာ။ ကိုရင် အသက်ရှည်မှာပါ´ဟူ၍ ဖြစ်ပေသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:20:00 AM No comments:
အဲကွန်းဖွင့်ထားလို့ချမ်းတာထက် အကြောင်းရင်းမရှိ တစ်ချိန်လုံး ခြေဖျား၊ လက်ဖျားအေးပြီးချမ်းတဲ့ ခံစားမှုဖြစ်လာရင်တော့ စစ်ဆေး ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါပြီ။ အမျိုးသမီး အများစုဟာ ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကြုံ တွေ့နေတာကြောင့် ဘယ်လို အကြောင်းရင်းကြောင့် ချမ်းသလဲ ဆိုတာ သတိထားကြည့်နိုင်ဖို့ မျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်း တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသင့်တဲ့ အဆီပမာဏထက်နည်းတာ ကြောင့် အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ် နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလို့ချမ်းတတ်ပါ တယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိန်းတဲ့ဒြပ်ထုတ်ပေးတဲ့ သိုင်း ရွိုက်အကျိတ်ကနေ လုံလောက် တဲ့ ဟိုမုန်းမထုတ်ပေးနိုင်လို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သံဓာတ်မပြည့်ဝရင်လည်း အချမ်းဒဏ်မခံနိုင်တာမျိုးဖြစ် တတ်သလို သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းရင်လည်း ခြေလက်တွေ ရေခဲလိုအချိန်ပြည့်အေးနေပြီး နေ ထိုင်မကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ နှလုံး သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါလည်း ဖြစ်တတ်တာမို့ ခါတိုင်းနဲ့မတူဘဲ အရမ်းအေးတဲ့ခံစားမှုမျိုးရရင် တော့ ဆေးစစ်ကြည့်ဖို့လိုလာပါ ပြီ။
သွေးနီဥဆဲလ်တွေကို အား ဖြစ်စေတဲ့ ဗီတာမင်ဘီ ၁၂ ချို့တဲ့ ရင်လည်းဖြစ်တတ်သလို အိပ်ရေး မဝတဲ့ကာလတွေများလာရင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းလုပ်ငန်းဆောင် တာတွေ ပုံမှန်အတိုင်းမဟုတ် တော့ဘဲ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ထုတ် ပေးတာကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက် လည်း ချမ်းနိုင်ပါတယ်။ အရွယ် ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်မှာ ရေဓာတ်က ၆၀ ရာခိုင် နှုန်းကျော်ရှိပြီး ရေဓာတ်က ကိုယ် တွင်းအပူချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေတာ ကြောင့် ကိုယ်တွင်းရေဓာတ်ကုန် ခန်းနေရင် အပူချိန်မညီမျှတာတွေ ဖြစ်ပြီး အချမ်းဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဖြစ် တတ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြနေရင် (ဒါမှမဟုတ်) ဆီးချို ရောဂါရှိနေပြီဆိုရင်လည်း ခြေ လက်အေးတတ်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးရှိ တတ်ပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်း ထားပြီး လိုအပ်တဲ့အပူဓာတ်ကို ထုတ်ပေးတာကြောင့် ကြွက်သား တွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ လေ့ ကျင့်ခန်းယူရမှာပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:18:00 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းကို ပထမဦးဆုံး စတင်လုပ်ကိုင်သူ၊ (၁၉၀၀)ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်ကပင် အိန္ဒိယ ရူပီးငွေ သိန်းတစ်ရာခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် "ဦးရဲကျော်သူ အင် ကုမ္ပဏီလီမီတက်" လုပ်ငန်းကို တည် ထောင်ခဲ့သူ၊ သူ့ခေတ်သူ့အခါက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အချမ်းသာဆုံး လုပ်ငန်းရှင်၊ သူ့လက်နှင့် ထိသမျှ ငွေဖြစ်သည်ဟု တင်စားပြောခံရသူ၊ အိန္ဒိယအစိုးရကပင် ဖိတ်ကြား၍ သူဌေးဘွဲ့နှင့် ကျက်သရေဆောင် ရွှေစလွယ် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသင်ပညာ မရှိသော်လည်း ထူးခြားသော ဇွဲလုံ့လ ၀ီရိယ တီထွင်ဥာဏ်နှင့် ပြည့်စုံ၍ လှေထိုးသားဘ၀မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လာသူ၊ သူဌေး ဖြစ်လာသော်လည်း ဘ၀မမေ့ဘဲ လှေထိုးသားဘ၀က အသုံးပြုခဲ့သည့် လှော်တက်ကို ရွှေချလျက် အိမ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသူ၊ ထူးခြားမှု တစ်ရပ် မှာ အများအကျိုးအတွက် နေ့စဉ် နံနက် ၄ နာရီ အိပ်ရာမှထကာ လက်ဆွဲမီးအိမ်ကိုင် ကုလား တပည့်ကလေးနှင့် အတူ မြို့ကိုလှည့်၍ "အရပ်သားတို့၊ ရွာသားတို့၊ ထကြလော့၊ ရေထဲတွင် ငွေတွေ မျှောနေသည်၊ ဆယ်ယူကြလော့"ဟု ဆော်သြလေ့ရှိသူ စသည့် ကောင်းသတင်း အဖုံဖုံနှင့် ပြည့်စုံသော စွန့်စားတီထွင် စီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်သူများထံမှ အပ်ငွေနှင့် ထုတ်ငွေများကို ချက်လက်မှတ်စနစ် သုံး၍ ငွေချေး ခြင်း၊ ရွှေပေါင်၊ မြေပေါင်လက်ခံခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ဘဏ်လုပ် ငန်းပိုင်ရှင်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ထိုဘဏ်လုပ်ငန်းသည် ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရူပီး ငွေ သိန်းတစ်ရာကျော် ရှိသည်။ဦးရဲကျော်သူ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သတ္တမမြောက်သားဖြစ်သာ ဦးရွှေသာသည် ၁၉၂၄ ခုနှစ် ၀န်းကျင်တွင် တရားဝင်ဘဏ်အဖြစ် စနစ်တကျ တည်ထောင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းဘဏ်မှ "မသံဒါဖြူအင် ကုမ္ပဏီ လီမီတက်"ကို ခွဲခြား တည်ထောင်၍ အိမ်ငှားခ၊ မြေငှားခ ကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ သည်။ ဦးရဲကျော်သူ၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု ဂုဏ်သတင်းကြောင့် အိန္ဒိယအစိုးရက ဖိတ်ကြား၍ အိန္ဒိယ သူဌေးများကို ချီးမြှင့်သည့် သူဌေးဘွဲ့နှင့် ကျက်သရေဆောင် ရွှေစလွယ်ရတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၇၂ ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် (၁၃) ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် (၈)နာရီတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် သားသမီးများအတွက် အမွေအဖြစ် ရူပီး ငွေ သိန်း ၇၀ မျှ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
မောင်ဇေယျာ ရေးသားသော မြန်မာလူကျော် ၁၀၀ (ပထမအုပ်) မှ-ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:17:00 AM No comments:
“မခွဲမခွာ ဘဝဆက်တိုင်းတွေ့လိုတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကို မြတ်စွာဘုရားက ပေးတဲ့နည်း”
✧ သဒ္ဓါ-သီလ-စာဂ-ပညာ ကြောင်းလေးဖြာ တူညီပါစေ ✧
✧ နကုလပိတာနှင့် နကုလမာတာ၊ ဒီဇနီးမောင်နှံတို့က ဘုရားရှင်ရဲ့ မိဘအဖြစ်
နဲ့ ဘ၀ပေါင်းငါးရာ, မိကြီး, မိထွေး, ဘကြီး, ဘထွေးအဖြစ်နဲ့ ဘ၀ပေါင်း ငါးရာ
စီဆိုတော့ ဘ၀ပေါင်း တစ်ထောင့်ငါးရာစီလောက် ဆွေမျိုး ဆက်တိုက် တော်စပ်
✧ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရား သုသုမာရဂိရိတောင်ခြေ ဘေသကဠာဝနအမည်
ရနေတဲ့ ရွာနိဂုံးကြီးသို့ ရောက်ရှိတဲ့ အချိန်အခါမှာ နကုလပိတာ နကုလမာတာ
ခေါ်တဲ့ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးက ဘုရားရှင်ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်း သားဟူသော ချစ်
ခြင်းဖြင့် အလွန်အမင်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အတွက် ခြေဖက်ပြီးငိုကြတယ်၊ သားလို့
ပဲ ခေါ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ အတွင်းရေး အိမ်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေကို
လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လျှောက်ထားကြတယ်။
သူတို့က ဘာလျှောက်သလဲ? —
✧ တစ်ချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားကို ဆွမ်းပင့်ပြီး ကပ်လှူတယ်၊ ဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စ ပြီး
တဲ့အချိန်အခါမှာ နကုလပိတာအမည်ရှိတဲ့ ဒါယကာကြီးက ဘာလျှောက်သလဲ? -
✧ “မြတ်စွာဘုရား …တပည့်တော်သည် ငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းက နကုလ
မာတာအမျိုးသမီးကို တပည့်တော်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထိုအချိန်အခါ
က စပြီးတော့ ယနေ့တိုင်အောင် နကုလမာတာအမျိုးသမီးကလွဲလျှင် အခြားအမျိုး
သမီးတွေ အပေါ်၌ စိတ်ဖြင့်သော်လည်း တပည့်တော်တစ်ခါမှ ဖောက်ပြားခဲ့
တယ်လို့ မရှိခဲ့စဖူးပါဘူး၊ ကာယကံမြောက် ၀စီကံမြောက် လွန်ကျူးဖို့ဆိုတာ အ
ဘယ်မှာ ဆိုဖွယ်ရာရှိပါမလဲ မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဒီဘ၀မှာလည်း
နကုလမာတာအမျိုးသမီးကိုပဲ အမြဲတမ်းမြင်ချင် တွေ့ချင်နေပါတယ်၊ နောင် သံ
သရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း ဒီနကုလမာတာအမျိုးသမီးကို မြင်ချင် တွေ့ချင်
နေပါတယ် မြတ်စွာဘုရား …” ဆိုပြီးတော့ လျှောက်ထားတယ်။
✧ အဲဒီစကားကို ကြားလိုက်တော့ နကုလမာတာ ဒါယိကာမကြီးကလည်း အား
ကျမခံ မြတ်စွာဘုရားကို ပြန်ပြီးတော့ ဘယ်လို လျှောက်ထားသလဲ?
✧ “မြတ်စွာဘုရား …တပည့်တော်မကို ဒီနကုလပိတာအမျိုးကောင်းသားက ငယ်
ရွယ်စဉ်အခါကတည်းက လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး အိမ်ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ထို
အချိန်အခါမှ စပြီး တပည့်တော်မသည် တခြားတခြားသော ယောက်ျားတို့အပေါ်
၌ စိတ်ဖြင့် ဖောက်ပြားခြင်းကို အမှတ်မရစဖူးပါ မြတ်စွာဘုရား၊ကာယကံမြောက်
၀စီကံမြောက် လွန်ကျူးဖို့ဆိုတာ အဘယ်မှာ ပြောဆိုဖွယ်ရာ ရှိပါမလဲ မြတ်စွာဘု
ရား၊ တပည့်တော်မသည် ဒီဘ၀မှာလည်း ဒီနကုလပိတာ အမျိုးကောင်းသားကို
မြင်တွေ့လိုပါတယ်၊ နောင်သံသရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း ဒီနကုလပိတာအမျိုး
ကောင်းသားကို မြင်တွေ့လိုပါတယ်” ဆိုပြီးတော့ လျှောက်ထားတယ်။
အဲဒီလို လျှောက်ထားလိုက်တဲ့ အချိန်အခါမှာ -
✧ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကို မြတ်စွာဘုရားက သူတို့ရဲ့ လိုလားတောင့်တချက်တွေ
ကို ပြည့်ဝလာအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအင် အပြည့်အ၀ ရှိနေတဲ့ နည်း
လမ်းကောင်း (၄)ချက်ကို ဟောကြားပေးတော်မူပါတယ်။
✧ အဲဒီနည်းလမ်းကောင်း ကျင့်စဉ်(၄)ချက်ကိုတော့ ဒီနေ့ တရားနာပရိသတ်တွေ
နှစ်ခြိုက်မယ်ဆိုလျှင်လည်း လက်ခံကြပေါ့။ မနှစ်ခြိုက်လျှင်လည်း ပယ်လှန်နိုင်
ဘယ်လို နည်းပေးထားသလဲ? —
✧ ဘုရားရှင်ပေးတဲ့နည်းက ဘာလဲ? ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးတို့က ဒီဘ၀မှာလည်း
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မြင်ချင်ကြတယ်၊ နောက်နောင်ဘ၀မှာလည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
မြင်ချင်ကြတယ်ဆိုလျှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသားတို့ဟာ —
နံပါတ် (၁) သဒ္ဓါတရားချင်း တူညီရမယ်၊
နံပါတ် (၂) ကိုယ်ကျင့်သီလချင်း တူညီရမယ်၊
နံပါတ် (၃) ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း စာဂတရားချင်း တူညီရမယ်၊
နံပါတ် (၄) ဉာဏ်ပညာချင်း တူညီရမယ်၊
✧ ဒီဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးလုံးကတော့ ဘုရားရှင်ကို ခေါင်ဆုံး ဖူးတွေ့ရတဲ့ အချိန်အ
ခါက စပြီး သောတာပတ္တိမဂ်္ပဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်တိုင်အောင် ဉာဏ်ပညာတွေ ရင့်
ကျက်ထားပြီးတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။
✧ ဒီတော့ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးက သဒ္ဓါတရားချင်းလည်း တူတယ်၊ ကိုယ်
ကျင့်သီလချင်းလည်း တူတယ်၊ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်း စာဂတရားချင်းလည်း တူ
တယ်၊ ဒါယကာကြီးက လှူလျှင် ဒါယိကာမကြီးက ကြည်ဖြူတယ်၊ ဒါယိကာမကြီး
က လှူပြန်လျှင်လည်း ဒါယကာကြီးက ကြည်ဖြူတယ်၊ ပညာချင်း ကြည့်လိုက်ပြန်
တော့လည်း သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ဆိုက်နေတဲ့ သူတော်ကောင်း
တွေ ဖြစ်ကြတယ်၊ ၀ိပဿနာပညာ မဂ်ပညာ ဖိုလ်ပညာချင်းလည်း အားလုံး တူ
✧ အဲဒီလို တူညီခဲ့မယ်ဆိုလျှင်တော့ ဒီဘ၀မှာလည်း အချင်းချင်း တွေ့မြင်နိုင်
တယ်၊ နောင်သံသရာ အဆက်ဆက်မှာလည်း အချင်းချင်း တွေ့မြင်နိုင်ကြပါ
တယ်လို့ ဒီလို နည်းပေးတယ်။
✧ ဒီသူတော်ကောင်းတွေကတော့ ခုနက တဏှာဖြင့် ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားတာ
မဟုတ်ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကနေ ကြည့်လျှင်တော့ တဏှာဖြင့်
ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရား ရှိတန်သလောက် ရှိသော်လည်း
ဘာကြောင့် အားမကောင်းဘူးလို့ ပြောရသလဲ?
✧ ဒီသူတော်ကောင်းတွေက တစ်ဦး နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက် တစ်ဦးက ၀ိုင်းပြီး
တော့ ပါရမီဖြည့်ပေးချင်တဲ့ ကုသိုလ်ဆန္ဒဓာတ်တွေ သူတို့မှာ ကိန်းဝပ်နေပါ
တယ်။ တစ်ဦးကောင်းစားရေးအတွက် တစ်ဦးက လိုလားတောင့်တနေတဲ့ စိတ်
ထားသာ ဖြစ်တယ်။ ကာမဂုဏ် ခံစားဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ သူတို့က တွေ့ကြ
✧ ဖားအောက်တောရဆရာတော် ✧
✧ (ဣန္ဒြိယဇာတ် တရားဒေသနာတော်) ✧
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:14:00 AM No comments:
လူများစုဟာ သာမန်အားဖြင့် အလိုလိုနေရင်း စိတ်ဓါတ်ကျ စိတ်အားငယ်လေ့မရှိကြပါဘူး။ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်သာ စိတ်ဓါတ်ကျ စိတ်အားငယ်လေ့ရှိကြပြီး တချို့က နာလန် ထမှုမြန်ဆန်တတ်ပေမဲ့ တချို့က နလန်ထမှုနှေးတတ်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ စိတ်ဓါတ်ကျစိတ်အားငယ်မှုရဲ့ အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီး ထာဝရ လက်မြှောက် အရှုံးပေးကာ ကမ္ဘာလောကထဲကနေ အပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေချိန်၊ မိသားစုပြဿနာ၊ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာ စိတ်ဓါတ်ကျတတ်ပြီး အဲလိုပြဿနာတွေစုပေါင်းပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဆို စိတ်ဓါတ်ကျစိတ်အားငယ်ခြင်းက ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်တာကို မြင်တွေ့ပြီး မိမိနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မိကာ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျစိတ်အားငယ်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းမှုတစ်ခုလိုပဲ စိတ်ခွန်အားတွေ ကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်အင်အားတွေ ချို့တဲ့အားနည်းခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပြင်းထန်သူတွေအတွက် စိတ်ရောဂါအထူးကုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ သာမန်စိတ်ဓါတ်ကျ အားငယ်သူတွေ အနေနဲ့ အောက်ပါအချက်တွေကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်အင်အားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးစေပြီး စိတ်ဓါတ်ကျစိတ်အားငယ်မှုကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(၁) မိမိမှာရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ချရေးပါ
စိတ်ဓါတ်ကျ စိတ်အားငယ်ချိန်မှာ လူများစုဟာ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေ၊ မအောင်မြင်မှုတွေကို ထပ်တလဲလဲတွေးမိနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျ စိတ်အားငယ်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေတဲ့အထိစိတ်ဓါတ်ကျရောဂါခံစားနေရသူတွေဟာ တကယ်တမ်းအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။ ဒီလိုသာဆို ကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံသူတွေ၊ ရောဂါဘယဖိစီးမှုကြောင့်ဆေးရုံမှာ ကာလရှည်နေနေရသူတွေ ဘယ်မှာရှိတော့မှာလဲ။ ဒါဟာ တွေးတောစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ မဟုတ်ပါလား။ မိမိမှာရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ချရေးပြီး ပြန်လည်ဖတ်ကြည့်ရင်း စိတ်ခွန်အားပြန်ပြည့်လာတာ အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ - "ငါဟာ အသားဖြူတယ်၊ ငါဟာ အရပ်ရှည်ပြီး ခန့်ညားတယ်၊ ငါဟာ ဟာသဥာဏ်ရှိတယ်" စသဖြင့်ချရေးပါ။ မရှက်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်မိတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါ။ ချီးမွမ်းဂုဏ်ယူဖွယ်ရာသာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မိမိမှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ချရေးပါ
လူတိုင်းမှာ အရည်အချင်းကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ သူများနဲ့မတူပေမဲ့ ကိုယ့်မှာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အရည်အချင်းတော့ရှိတတ်ကြတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှန်အတိုင်းရှုမြင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို တစ်ခုချင်းချရေးပါ။ တခြားသူတွေအနေနဲ့အရေးမပါတဲ့အရည်အချင်းမျိုးဖြစ်နေမှာပဲ ဆိုပြီး ချန်ထားခဲ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ကောင်းမွန်တဲ့အရည်အချင်းတိုင်းဟာ တချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်တာချည်းပါပဲ။ ဥပမာ - "ငါဟာ ဘွဲ့ရပြီးသား၊ ငါ ရေကူးတတ်တယ်၊ ငါ့မှာ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်" စတဲ့အချက်တွေကို ကိုယ့်စိတ်ထဲစဉ်းစားမိသလောက်ချရေးလိုက်ပါ။
(၃) မိမိဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မိမိကိုချစ်တဲ့သူတွေ စေတနာထားတဲ့သူတွေကို ချရေးပါ
ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ၊ အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုဖူးသူ၊ ကိုယ့်အပေါ်ချစ်ခင်သူ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းတွေထဲက ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်သူ၊ အွန်လိုင်းဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ စတာတွေကိုပါ မချွင်းမချန်ချရေးပါ။ ကိုယ့်မှာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ပေါများပြီး ပျော်စရာဘ၀တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) မိမိရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ချရေးပါ
အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေလို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရခက်ခဲနေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ခွင်မှာလုပ်တိုင်း အဆင်မပြေ ချီးကျူးမခံရ ဆူကြိမ်းခံနေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိဟာ အလုပ်မှာ အလွန်ညံ့ဖျင်းတယ်လို့ ထင်မြင်မိစေပါတယ်။ တကယ်တော့ အရင်အလုပ်တွေမှာရော အခုအလုပ်မှာပါ ကိုယ်စွမ်းဆောင်ခဲ့တာ ရှိကိုရှိခဲ့မှာပါ။ ဒါကို သေချာပြန်စဉ်းစားပြီး ချရေးပါ။ အသေးမွှားဆုံးစွမ်းဆောင်ချက်ဟာလည်း အရေးပါကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပြီး သေသေချာချာ စာရင်းပြုစုပါ။ ဥပမာ - "ငါအမြဲအလုပ်ကို စောစောရောက်တယ်၊ ငါ့အရင်အလုပ်မှာ ရောင်းအားတက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့ထဲ ငါပါဝင်ခဲ့တယ်" စသဖြင့်ချရေးသင့်ပါတယ်။
(၅) မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကို ချရေးပါ
ငါဟာ မိသားစုအတွက် လစဉ်ငွေထောက်ပံ့ခဲ့တာပဲ၊ မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ယာယီကာလတစ်ခုအတွက် စိတ်ဓါတ်မကျသင့်ဘူး၊ ငါအရင်ကပရဟိတတွေမှာ တတပ်တအား ပါဝင်ပြီး ငွေအားလူအားနဲ့ ကောင်းမှုပြုခဲ့တာပဲ အစရှိသည်ဖြင့် မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကို ချရေးပါ။
(၆) မိမိရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်အတွက် လျှောက်လှမ်းထားသမျှကို ချရေးပါ
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပြီး ကြိုးစားနေရင်း စိတ်ဓါတ်ကျစရာရှုံးနိမ့်မှုတွေ ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ လက်လျှော့ချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီး မိမိဘ၀အဆုံးသတ်တော့မလိုလို ခံစားမိတတ် ပါတယ်။ မိမိလျှောက်လှမ်းခဲ့သမျှ ဘ၀ခရီးလမ်း၊ မိမိလုပ်ခဲ့သမျှ အလုပ်တွေအားလုံးကို ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အောင်မြင်ခဲ့တာရှိသလို ကျရှုံးခဲ့တာလည်း ရှိတာပါပဲ။ အနာဂတ် ပန်းတိုင်အတွက် အခုအချိန်မှာ စိတ်အားငယ်စရာကြုံတွေ့နေပေမဲ့ ဆက်လျှောက်နေမှသာ ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အရင့်အရင်ကာလတွေမှာလည်း ဒီလိုစိတ်ဓါတ် ကျစရာတွေကြုံခဲ့ပေမဲ့ ဆက်လျှောက်ခဲ့လို့သာ ဒီအခြေအနေထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိပြီး စိတ်အားတက်လာပါလိမ့်မယ်။
(၇) ချရေးထားသမျှပြန်ဖတ်ပြီး အားမွေးပါ
အထက်ပါအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ချရေးပါ။ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူအဖို့ တခါတလေမှာ ဒီလိုချရေးဖို့တောင် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းနေလောက်ပေ မဲ့ ရေးရင်းရေးရင်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးကြည်လင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ရေမိုးချိုးအ၀တ်အစားလဲ၊ အပြင်ထွက်ပါ။ ငွေကြေးအဆင်ပြေရင် ဈေးဝယ်ထွက်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အ၀တ်အစားနည်းနည်းဝယ်ပါ။ အများကြီးငွေကုန်ခံပြီးမှ ပြန်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလည်း မဖြစ်ပါစေနဲ့။ တကယ်လို့ ပရဟိတအသင်းတစ်ခုခုထဲမှာ ပါဝင်ထားခဲ့ရင် အခုချိန်ဟာ ပရဟိတအသင်းနဲ့အတူ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ မိမိထက် ချို့တဲ့နွမ်းပါးသူတွေကို စိတ်ပါလက်ပါကူညီပေးခြင်းဖြင့် ပီတိကိုလည်း ခံစားမိစေပြီး စိတ်အားငယ်စရာကြုံတွေ့ရသူမှာ မိမိတစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်း သံဝေဂရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
English Version ကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီစာမျက်နှာရဲ့ အပေါ်ဆုံးညာစွန်က language tab မှာ English ကို နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါနော်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 8/29/2015 11:12:00 AM No comments: